TAARIIKHDA ISLAAMKA SOMALIYA IYO TAARIIKHDA CULIMADA AHLUSUNNA WAL-JAMAACA EE SOMALIYA WAXAAd diyariyay shiikh c/rasaaq yuusuf aadan | Ashaacira's Blog
AHLUSUNNA WAL-JAMAACA WAA CULIMADA SAXDA AH
sawirada culimada ahlusunna waljamaaca
Taariikhda culimadii jamaacadii baardheere
taariikhda shiikh uweys axmad oo looyaqaano sheekh aweys al-qaadiri.oo somalida intabada diinta gaarisiiyo illaa iyo south afrika
taariikhda ururada diinga ee somaliya
Wahaabiyada Iyo Soomaaliya
yaa ah ahlusunna ?
← waxbarashada diiniga ee somaliya
taariikhda asxaabta iyo culimada salafu saalix ee somaliya →
TAARIIKHDA ISLAAMKA SOMALIYA IYO TAARIIKHDA CULIMADA AHLUSUNNA WAL-JAMAACA EE SOMALIYA WAXAAd diyariyay shiikh c/rasaaq yuusuf aadan
SOOMAALIYA IYO TAARIIKHDII ISLAAAMKU SOO GAARAY.
(1) SAFARAADII UGU HORREEYEY EE ASXAABTA.
Dalka Soomaaliya waxaa lagu tiriyaa waddamada xagga taariikhda ugu faca weyn adduunka. Waxaa ku nool dad lagu qiyaaso 15 milyan, waxayna inta xorta ah dhan tahay 683.000 kiiloomiter laba jibbaaran. Dalka Soomaaliya wuxuu ku yaallaa Qorrax ka soo baxa Geeska Afrikada Bari.
Soomaaliya waa dad diinta Islaamka ku leh taariikh iyo xadaarad fac weyn, waana waddankii ugu horreeyey ee diinta Islaamku soo gaartay shan sano oo keliya markii laga joogay soo bixitaankii Rasuulka (CSWS). Waqtigaas wuxuu ku aadan yahay siddeed sano ka hor Hijradii Rasuulka (CSWS) ee Madiina, bishii Rajab taariikhda Miilaadiyadu markay ahayd 615.
Waxaa Asxaabtii u horreysay ee Soomaaliya diinta soo gaarsiiyey hoggaaminayey Khaliifkii 3-aad ee Islaamka Al-Sayid Cusmaan Ibnu Cafaan (RC.) Sayid Cusmaan waxaa safarkiisaas qaaliga ah ku wehliyey Asxaab ka kooban 10 rag ah iyo 5 haween ah oo ay ka mid ahayd haweenaydiisii Ruqiya oo ahayd gabadhii uu dhalay Rasuulkeenna Suuban Muxammed (CSWS).
Safarkaas nuurka badan ee Sayid Cusmaan hoggaaminayey waxaa la xariirey safarkii labaad ee Hijratul Xabasha oo uu hoggaaminayey Al-Sayid Jacfar ibnu abii Daalib (RC) oo ahaa Rasuulka (CSW) ina adeerkii Sayid Jacfar waxaa safarka ku wehliyey Asxaab ka kooban 83 rag iyo 18 haween ah. Labadaas safar ee barakeysani waxay ka soo tilaabeen xeebaha waqooyi ee Soomaaliya.
Sida ay qoreen kitaabbada muctamadka ah ee taariikhda iyo siirada diinta Islaamka Asxaabtii waqtigaas waddankeenna timid waxay gaarayeen tiradooda (116) boqol toban iyo lix Saxaabi oo isugu jira rag iyo haween. Waxaa Asaxaabtii ugu caansanayd ka mid ahaa:-
1- Cuthmaan ibnu Cafaan oo ah khaliifkii 3-aad ee Islaamka.
2- Sowjaddiisii Ruqiya binti Rasuulillaah oo ah gabadhii uu dhalay Rasuulka (CSW).
3- Ummu Salama oo hijrada kaddib noqotay Sawjaddii Rasuulka (CSWS)
4- Umu Xabiiba Binti Abii Sufyaan oo ayana hijradii kaddib noqotay Sawjadii Rasuulka.
5- Jacfar Bin Abii Daalib oo ah Nebiga ina adeerkii.
6- Cabduraxmaan Ibnu Cawf oo ka mid ah 10-kii Jannada loogu bishaareeyey ee Casharatul-Mubashariin.
7- Subeeyr Ibnu Cawaam oo isna ka mida ah 10-kii janada loogu bishaareeyey ee Casharatul-Mubashariin.
8- C/llaahi Ibnu Mascuud oo ka mid ah Cabaadaladii Asxaabtii Rasuulka (CSWS).
9- Abuu Muusal Ashacari oo ka mid ahaa Caalimiintii ugu waa weynayd Asxaabta Rasuulka (CSWS).
10- Cusmaan ibnu Madcuun oo ahaa walaalkii Rasuulka (CSWS) ee xaga nuugmada.
11- C/llaahi ibnu Jaxshi
12- Maqdaad ibnu Aswad
13- iyo Muscab ibnu Cumayr oo ahaa safiirkii ugu horreeyey Islaamka ee Madiina loo diray.
Waxaa iyana in la fahmo mudan, in Hijriyooyinkaa aanu soo sheegnay ee loo yaqaan Hijriyadii 1aad iyo tii 2aad ee Xabasha aanay ku koobnayn waddanka hadda loo yaqaan Itoobiya. Waxaa marqaati iyo caddeynba ku filan in hadda iyo waqtigaas aanay Itoobiya lahayn wax bad ah. Taasi waxay caddeynaysaa in Asxaabtu markii ay u sii socdeen Boqorkii Xabashida ee Najaashi ay u sii mareen dalka iyo dadka Soomaaliya. Waxaa kaloo iyana jirta in waqtiyadaas dalka Xabasha loo yiqiinay dhulka hadda la isku yiraah Iriteriya, Itoobiya, Soomaaliya iyo xattaa qofka modow. Raadka Hijrooyinkaas waa mid weli ka muuqanaya Soomaaliya, oo illaa iyo hadda boqolkiiba boqol Muslim ah.
This entry was posted in sii aqri halkaan. Bookmark the permalink.
Sheikh Cabdi raxiim Sheikh Cusman Sheikh Xasan Macalin oo ah caalim boqol sano jir ah, kana mida Culumaa’udiinka Ahlusunna Wal Jameeca dariiqada axmadiyada degmada basra
macalim nuur maxamad siyaad caalim murabbi ah
shiikh abuukar xasan maalin waa caalim diinta islamka ukhidmeeya oo masajidyada iyo idaacadaha mogdisho ka aqriya funuunta islaamka . radhiyallaahu canhu
shiikh cabdullaahi tawasul waxa uu kamid yahay culimada ahlusunna kuwa fidiya diinta islamka
Wahaabiyada Iyo Soomaaliya (Qeybtii 1-aad)
buuga cusub ee lamagacbaxay(Farxaddii Guul Darrada) Midawga Maxaakimta oo kahadlaya dagaaladii udhaxeeyay hugaamiyayaasha iyo maxaakiimta islaamka